Madaxweynaha Masar Oo Amarro Cajiib Ah Faray Ciyaartoyga Dalkiisa, Mohamed Salah Oo U Jawaabay Iyo Shirkii Qasriga Madaxtooyada Ee Sabtidii Oo Faahfaahsan | Haqabtire News
June 10, 2018 - Written by Warbaahinta Haqabtire
Madaxweynaha waddanka Masar Abdel-Fattah El-Sisi ayaa ciyaartoyga xulka qaranka dalkiisa kulan kula yeeshay qasriga Madaxtooyada ee Qahira, maalin ka hor inta aanay u duulin waddanka Ruushka oo Khamiista uu ka furmayo Koobka Adduunka 2018.
Sida uu sheegay afhayeenka madaxweynaha Masar oo lagu magacaabo Bassam Rady, Madaxweyne Abdel-Fattah El-Sisi ayaa hadal uu u jeediyey ciyaartoyga waxa uu ugu rajeeyey nasiib wanaagsan inay kala kulmaan Ruushka, waxaanu u muujiyey inuu kalsooni buuxda ku qabo, iyagana ay tahay inay ogaadaan masuuliyadda culus ee garbaha u saaran.
El-Sisi waxa uu amar ku siiyey ciyaartoyga xulka qaranka inay u ciyaaraan sida ugu wanaagsan ee farxad gelin karta shacabka Masar, waxaanu ku adkeeyey inay illaaliyaan nidaamka, qiyamka iyo dhaqanka soo jireenka ah ee Masaarida, taas oo ay tahay inay ku muujiyaan gudaha waddanka Ruushka.
“Madaxweynuhu wuxuu xubnaha xulka qaranka weydiistay inay sida ugu wanaagsan ee farxad gelinaysa dadka Masar u ciyaaraan, waxaanu ku adkeeyey inay muujiyaan akhlaaqadda, ka turjumaysa dhaqanka soo jireenka ah ee Masaarida” Sidaas ayuu yidhi Bassam Rady, afhayeenka madaxweynaha Masar.
Wasiirka ciyaaraha Masar oo lagu magacaabo Khaled Abdel-Aziz iyo xubnaha guddida xidhiidhka kubadda cagta dalkaas ayaa ka qayb-galay shirka oo ay goob-joog ka ahaayeen ciyaaryahannada, tababareyaasha iyo dhakhaatiirta kooxda u raacaysa waddanka Ruushka.
Markii uu shirku dhamaaday, waxay ciyaartoyga Masar magaalada Qahir gaar ahaan garoonka weyn ee International Stadium ku qaateen tababarkii ugu dambeeyey, waxaanay Axadda maanta u duulayaan waddanka Ruushka oo ay kaga qayb-gelayaan Koobkii Adduun ee ugu horreeyey tan iyo sannadkii 1990-kii.
Tababaraha xulka qaranka Masar, Hector Cuper ayaa isaga oo hor taagan Madaxweyne Sisi shaaciyey in xulku diyaar u yahay Koobka Adduunka, waxaanu ballan-qaaday inay keeni doonaan wax dadka Masar farxad geliya.
Masar oo toddoba jeer ku guuleystay Koobka Qaramada Qaaradda Afrika, ayaa ciyaarta koowaad ee Koobka Adduunka waxay 16 June oo ku beegan Sabtida toddobaadka dambe ay la ciyaari doonaan Uruguay, waxaana ugu xigi doona Ruushka oo ay foodda is dari doonaan 19 June, halka ciyaarta ugu dambaysa ee group-ka ay Saudi Arabia dharka isku dhigan doonaan 25 June.
Isniintii toddobaadkii hore, tababaraha xulka qaranka Masar, Hector Cuper ayaa shaaciyey liiska 23-ka ciyaartoy ee ka qayb-gelaya Koobka Adduunka, kuwaas oo tababarkoodii ugu dambeeyey Sabtidii ku gunaanaday garoonka Qaranka ee Qaahir.
Ciyaarihii saaxiibtinimo ee toddobaadkii tegay, Masar waxay barbar dhac 1-1 ah la gashay Kuwait, ka hor intii aanay Colombia goolal la’aan ku kala tegin ciyaar ka dhacday Bergamo oo Talyaaniga ah, hase yeeshee ciyaartii Arbacadii ee ay magaalada Brussels kula yeesheen Belgium ayaa lagu karbaashay 3-0.
Bishii March laba ciyaarood oo saaxiibtinimo oo ay Masar la ciyaartay waddamada Portugal iyo Greece waxay kala soo noqotay niyad-jab, hase yeeshee, waxay rajo fiican ka qabaan in Group A oo u muuqda mid jilicsan inay kasoo bixi karaan.